Banyere Anyị - Cixi Fujing Plastic Products Factory
Cixi Fujing Plastic Products Factory e tọrọ ntọala na 1990, a ọkachamara emeputa na R & D, na-amị na ahịa dị iche iche na sịga nzacha. Ugbu a, anyị anọwo na nnukwu soplaya nke plastic sịga nzacha nke e exported na Japan, America, Europe, Middle East, Southeast Asia wdg Anyị obodo ika "Joyo" bụ ndị kasị ama na China.
Fujing emi odude ke Cixi obodo na a nnọọ adaba okporo ụzọ. Ọ na-ewe ihe na-erughị awa abụọ na atọ bụ isi na ọdụ ụgbọelu (Ningbo, Hangzhou, Shanghai) na China East.
Fujing na-elekwasị anya na-azọpụta na-ese siga 'ahụ ike na ndụ. Anyị guzosie a "Ụtaba Control Research Center" na Shanghai na mahadum na nnyocha institutes na 2000.Our nzacha ike wepu n'elu 90% nicotine, tar na ndị ọzọ na-egbu egbu na-emerụ umi siga.
Fujing nwere a usoro nke akpaka igwe, tinyere gbakọta, sorting, ule, mbukota na oru. Anyị akpaka mmepụta ọnụego bụ n'elu 90% nke na-eme anyị na ngwaahịa na nke kacha mma na-eri arụmọrụ. Fujing bụkwa ndị mbụ nwere a iri puku klas ájá-free Ogbako China.
Fujing ji obi ụtọ ka gị OEM / ODM ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a chọrọ. Anyị bụ mgbe njikere nye gị kacha mma ọrụ na elu àgwà ngwaahịa.
Ekwentị: + 86-574-63417868